အဆောက်အဦး တစ်ခုအပေါ်မှ ပန်းခြံများကြားထဲသို့ မိန်းမငယ်တစ်ဦး ဝုန်းကနဲ ပြုတ်ကျလာသည်
May 31, 2018 By Buzz Myanmar News in နိုင်ငံတကာ, မှုခင်း, ဖြစ်ရပ်မှန် Tags: တက္ကသိုလ်, မိဘ, တောင်ကိုရီးယား
🌟 အရှက်ကွဲ၍ လူသတ်လိုက်သည်🌟
၂၀၁၄ ခုနှစ် ၅ လပိုင်း ၂၀ ရက်နေ့
Daegu ( ဒဲဂုမြို့ – တောင်ကိုရီးယား )
မနက် ၉ နာရီ ၂၀ မိနစ်
အဆောက်အဦတစ်ခုအပေါ်မှ ပန်းခြံများကြားထဲသို့ မိန်းမငယ်တစ်ဦး ဝုန်းကနဲ ပြုတ်ကျလာသည်။”လူတစ်ယောက် ပြတင်းပေါက်က ခုန်ချလိုက်တယ်ဗျို့”အလန့်တကြားအော်သံကြောင့် လူများဝိုင်းလာသည်။မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေသည်။ ဖိနပ်မပါ သွေးအလိမ်းလိမ်းနှင့်အမြင့်မှကျသောဒါဏ်ရာများကြောင့် သေလုမြောပါးဖြစ်နေသည်။သူမသည် လူများကို တွေ့သောအခါ အားကိုးတကြီးဖြင့် မျက်ရည်များကျလာသည်။”ကယ်ပါ” အသံတိုးတိုးထွက်လာသည်။အလွန်အမင်း နာကျင်မှုကို ခံစားနေရပုံရသည်။သူမ ၄ ထပ်တိုက်ပေါ်မှ ခုန်ချလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်၊မိန်းမငယ်သည် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လည်း အလွန်ထိခိုက်ကာ နာကျင်လွန်း၍ ငိုကြွေးနေလေသည်။သူမသည် သတိရလိုက် မရလိုက် ဖြစ်နေရှာသည်။
အဆောက်အဦ အစောင့်ကြီးက” သမီး ဘာဖြစ်တာလဲ? တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ရန်ဖြစ်တာလား? တိုက်ပေါ်ကများခုန်ချလိုက်သလား?”” မသိပါဘူးရှင့် ကျွန်မ ဘာမှ သတိမရ”မိန်းကလေး သတိလုံးဝလစ်သွားတော့သည်။”ဟာ, သေသွားတာများလား နားလည်တဲ့သူရှိရင် လုပ်ကြပါဦး?”ဝိုင်းကြည့်နေသော အိမ်နီးချင်းများ တုန်လှုပ်သွားတော့သည်။
အဆောက်အဦ အစောင့်ကြီးသည် ၁၁၉ အရေးပေါ်ဌာနအား လျှင်မြန်စွာဖုန်းဆက်လိုက်သည်။မိန်းကလေး၏ တင်ပါးဆုံအရိုးများသည် အစိတ်စိတ် အမွှာမွှာကျိုးနေသည်။သူမအား တို့ထိလိုက်လျှင်ပင် နာကျင်လွန်းသွားကြောင်း သိသာသည်။ဘယ်သူမှ ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိနာကျင်မှုများနှင့် သတိလက်လွတ်ဖြစ်နေပုံရသည်။ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတို့က သူမအား ၁၁၉ ကားပေါ်သို့တင်၍ ဆေးရုံသို့ အမြန်ဆုံးပို့ရန်ကြိုးစားကြသည်။
သူမအား အရေးပေါ်ကားဖြင့်ခေါ်သွားစဉ် သတိပြန်လည်လာ၍ အော်ဟစ်လိုက်သည်။”ကျွန်မ အိမ်အထဲကို သွားကြည့်ကြပါ ပြဿနာတွေတက်နေတယ်”သူမ သတိပြန်မေ့သွားသည်။
၁၁၉ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းသည် ရဲစခန်းအား ချက်ချင်း ဖုန်းဆက်လေသည်။” အရေးကြီးတယ်ခင်ဗျ xxxxx လိပ်စာကို အမြန်သွားပေးကြပါ”ပေးသည့်လိပ်စာအတိုင်း ရဲတွေက အမြန်ဆုံးပြေးသွားလိုက်ကြသည်..။အားလုံးနောက်ကျသွားပြီဖြစ်သည်။မိန်းကလေး၏ အသက် ၅၀ ဝန်းကျင်ရှိ မိခင်ကြီးနှင့် ဖခင်ကြီးသည် ဒါဏ်ရာများစွာနှင့် သွေးအိုင်ထဲတွင် အသက် ဆုံးရှုံးနေပြီဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရလေသည်။
ဒါဟာ နှစ်လောင်းပြိုင် လူသတ်မှု။ရဲထောက်လှမ်းရေးများသည် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတိုင်း CCTV ကိုစစ်ကြည့်ကြသည်။ဓာတ်လှေကား CCTV တွင် ကျောပိုးအိတ်နှင့်လူငယ်တစ်ဦးသည် သေဆုံးသူ မိသားစု၏ အိမ်ထဲသို့ ဝင်သွားသည်ကိုတွေ့ရလေသည်။CCTV တွင် ထို ကျောပိုးအိတ်နှင့်လူငယ်တစ်ယောက်သည် သူ့ လက်မှာရှိသည့် သွေးများကို အဝတ်နဲ့ပတ်ကာ ထိုအိမ်မှ ပြန်ထွက်ပြေးသွားသည်ကိုလည်း တွေ့ရလေသည်။ထို့ကြောင့် လူသတ်တရားခံကို ရဲထောက်လှမ်းရေးတို့က ပင်ပင်ပန်းပန်း ရှာဖွေစရာမလိုပဲ ဖမ်းဆီးနိုင်လိုက်ကြသည်။
လူသတ်တရားခံ လူငယ်အား စတင်စစ်ဆေးကြသည်။“မင်း ဘာလို့ မိန်းကလေးရဲ့ မိဘတွေကို သတ်ပစ်ခဲ့တာလဲ?” လူသတ်တရားခံက ရဲအရာရှိမေးခွန်းအားမဖြေ သူက မေးခွန်းပြန်ထုတ်နေသည်။”၄ ထပ်ကခုန်ချတဲ့ မိန်းကလေး သေလား? မသေဘူးလားဗျ ?” “မသေပါဘူး အရိုးတွေပဲကျိုးသွားတာမင်း ဖြောင့်ချက်မပေးရင် အဲဒီမိန်းကလေးက သက်သေအဖြစ် အကုန်ပြောမှာပဲလေ” လူသတ်တရားခံသည် ထိုစကားကို ကြားလိုက်ရသည့်အခါ အတော်တုန်လှုပ်သွားလေသည်။” ဒီကောင်မ ကျွန်တော့် မကောင်းကြောင်းပြောတာ လုံးဝမခံနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်အကြောင်း ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောမယ်”ထို့နောက် လူသတ်သမားသည် ဖြစ်သမျှ အကြောင်းမှန်ကို ဖြောင့်ချက်ပေးလေတော့သည်။
သူမနာမည် ‘ဂွန်**’ လေ ကျုပ်ရည်းစားဟောင်းပေါ့။ ချောတယ်မဟုတ်လား?
ကျုပ်နာမည် ‘ဂျန်**’ ။
ကျုပ်လား ကျောင်းမှာ နာမည်ကြီးတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ။ကျုပ် က ကျောင်းသား လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်ပေါ့။ကျောင်းသားတွေကို မေးကြည့်လိုက် ကျုပ်ဟာ အလွန်ယဉ်ကျေးပြီး ပရဟိတအလုပ်တွေကို မငြီးငြူပဲလုပ်ခဲ့သူလို့ နာမည်ကြီးတာဗျ။တောက်!! ဒီကောင်မကြောင့်ကျုပ်လို လူတကာကို ကူညီတဲ့ကောင် ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲ ကျုပ်တို့ တက္ကသိုလ်မှာ လက်ချိုးရေတွက်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်ကျုပ်ဆို ကျောင်းသားတွေလေးစားကြတယ်။ကျုပ်က ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ။ ( ထိုစကားကို ဂျန် အထပ်ထပ်ပြောနေသည်။ )
ကျုပ်ဘာလို့ ဒီအလုပ်သလုပ်ခဲ့သလဲ?ကျုပ် ကို မသိတဲ့လူမရှိအောင် နာမည်ကြီးချင်လွန်းလို့ပေါ့ဗျ,ဒီနေရာကို မရ ရအောင်ကြိုးစားခဲ့ရတာ။ကျုပ်က ကျော်စောမှုကို နှစ်သက်တယ်လေ လူတွေကြားထဲ ထင်ပေါ်ချင်တယ်။လူတွေ ဂရုစိုက်မှုခံချင်တယ်ဒီလိုနေရာရရဖို့ အတော်ခက်ခဲ့တာဗျ.။
ကျုပ်နဲ့ ဂွန် ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၂ လပိုင်းမှာ ချစ်သူတွေဖြစ်ကြတယ်။နာမည်ကြီးတဲ့ ကျုပ်ကို ကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေက အများသား။ကျုပ်တို့ အဖွဲ့အစည်းထဲက ဂွန်က အချောဆုံး Queen လေ။ ဂွန်နဲ့ချစ်သူဖြစ်ရတာ ကျုပ်ဂုဏ်ယူတယ်။ဒီကောင်မ ချောတာ မချောတာတွေထက် ဒီကောင်မနဲ့တွဲရင် အခြားကောင်တွေက ကျုပ်ကို အားကျတယ်လေ။ နာမည်ပိုကြီးတာပေါ့။ဒါကြောင့် ဒီကောင်မကို ရွေးချယ်ခဲ့တာ။ကျုပ်တို့ ချစ်သူဖြစ်ပြီး ၂ လလောက်အကြာပေါ့။ ပြဿနာစခဲ့တာ။ကျောင်းသားတွေကို ကျုပ်ရည်းစား ကိုခေါ်ပြပြီး ကြွားချင်တယ်။ အချို့က မသိကြသေးဖူးလေဗျာ။ဒါကြောင့် ကျောင်းသားတွေကို အရက်သောက်ဖို့ ကျုပ် ဖိတ်လိုက်တယ်။
ကျုပ်ရည်းစား ဂွန်ကို ကျုပ်အနားမှာထိုင်ခိုင်းပြီးလူအများ အရှေ့မှာ ဂွန်ကို နိုင်ထက်စီးနင်း ဆက်ဆံပြလိုက်တယ်။ဒီလိုချောတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကျုပ်အတွက်တော့ ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာ လူတွေသိအောင်ပေါ့ဗျာ ပထမတော့ အဆင်ပြေတယ်ဗျ ဂွန်က ဘာဆိုဘာမှ သိပ်မပြောဘူး။ အခြားကောင်တွေကလည်း အထင်တကြီး ပြုံးစိစိနဲ့ပေါ့။မိန်းကလေးတွေကလည်း ကျုပ်ကို ရှိန်သွားကြတယ်။ကျုပ်တို့အားလုံး အတူတူ အရက်ဆက်သောက်နေကြတယ်။ ဂွန်ကို ကျုပ် ဟိုပစ္စည်းယူခဲ့စမ်း ဒီပစ္စည်းယူခဲ့စမ်း ခိုင်းလိုက် ဟန်ကျနေတာပေါ့။ရုတ်တရက် ဂွန်နဲ့ ကျုပ် ပြဿနာတက်ပါလေရော။စကားများကြတာဗျ။
ကျုပ်ပြောတဲ့စကားတွေ အရှေ့နဲ့အနောက်မညီပဲ..စကားမှားသွားတာကို ဂွန်က ငြိမ်ငြိမ်မနေ ထောက်ပြလိုက်တော့ ကျောင်းသားတွေက သိသွားပြီး ဝိုင်းရယ်ကြရော။ကျုပ် သောက်ရှက်ကွဲသွားတယ်။” အေးလေ အေးလေ ဟားဟား ခေါင်းဆောင်ကြီး ဂျန် ဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာလဲ ဟား..ဟား”။” ဂွန်ကို မနိုင်ပါနဲ့ အကိုရေ ဒီလောက်ချောတဲ့ ရည်းစားရထားတာ ပျော်အောင်ထားမှပေါ့” အရက် အရှိန်လေးရလာပြီဆိုတော့ ကျောင်းသားလေးတွေက ကျုပ်ကို ခံပြောလာတယ်။
ဒီကောင်မ ကဒီလိုအမှားထောက်ပြလိုက်တော့ ကျုပ် ခွေးလုံးလုံးဖြစ်သွားတယ်။ကျုပ်ရည်းစားဖြစ်ရင် ကျုပ်လက်အောက်မှာနေရမှာပေါ့ဗျအခုတော့ ကျောင်းသားတွေက ဂွန်ဖက်ပါပြီး ကျုပ်ကရှုံးနှိမ့်သလိုခံစားလိုက်ရတယ်။ဒါကို ကျုပ် မလိုလားဘူး။ကျုပ် အရှက်ကွဲသွားတော့ ဘယ်ရမလဲ မဆီမဆိုင် ကျုပ်သိထားတဲ့ ဒီကောင်မဒုက္ခရောက်ခဲ့တာကို ပြန် လှောင်ပစ်လိုက်တယ်။”ဟေ့ အားလုံးနားထောင်ကြ ဂွန် အကြောင်းပြောပြမယ် ဟိုတနေ့က ဂွန်လေ အရှက်ကွဲတာ အိမ်သာထဲမှာ ချော်လဲပြီး xxx”
ကျောင်းသားတွေက မရယ်ပဲ ကျုပ်ကို အံ့သြသလို ဝိုင်းကြည့်လိုက်တယ်။” အစ်ကို့ရည်းစားကို အစ်ကို ကိုယ်တိုင် နှိမ်နှိမ်ချချပြောရက်တယ်ဗျာ” အတန်းငယ်တဲ့ ညီတစ်ယောက်က ထ ပြောတယ်။ရင်ထဲမှာ တင်းသွားတယ်။အမြဲတမ်း အထင်ကြီးခံရတဲ့ ကျုပ်ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းမသိ။ကျုပ်စကားနဲ့ ကျုပ် အဆင့်အတန်းက အနိမ့်ဆုံး မြေကြီးအောက် ရောက်သွားပြီ။ဒီကောင်မကို အစိမ်းလိုက် ဝါးစားပစ်ချင်တယ်။
ဒီမှာတင် ဂွန်က ” ကျွန်မ ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိလို့ အားလုံးခွင့်ပြုပါဦးရှင့်”ပြဿနာတက်မှာစိုးလို့ရှောင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေး လူတွေအရှေ့ လူကောင်းလုပ်ပြန်တယ်။ကျောင်းသားတွေကလည်း ” အင်း ပြန်လေ ပြန်တာ အကောင်းဆုံးပဲ” တဲ့။ကျုပ် ပိုပြီး စိတ်တိုသွားတယ်။အေးပေါ့ နင်က အခြေအနေကိုထိန်းတဲ့အနေနဲ့ အိမ်ပြန်ပေးတယ်ပေါ့လေ ငါ့ထက် စဉ်းစားဉာဏ်ရှိတယ်ပေါ့။ဂရုဏာသက်တဲ့မျက်လုံးတွေက ဂွန့်ဆီမှာ ငါကတော့ လူယုတ်မာကြီးပေါ့လေ ဟင်း ဘယ်ရမလဲ ။ ကျုပ် ဂွန်ရဲ့အရှေ့ကို သွားပြီးလက်နဲ့ကာလိုက်တယ်။” သူငယ်ချင်းတို့ ငါ ဂွန်နဲ့ရှင်းစရာရှိတယ် မင်းတို့တွေ ထွက်သွားပေးကြမလား”အနှင်ထုတ်ခံရတဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ကျွန်တော့်ကို ပိုအထင်သေးသွားကြမယ်ဆိုတာ ကျုပ် အဲဒီတုန်းက မတွေးမိဘူး။လူတွေကို ကျုပ်ဟာ ဂွန်ကို အပြစ်ပေးတော့မယ့် ကျောင်းဆရာတစ်ဦးလို့ မြင်စေချင်တာ။ကျောင်းသားတွေလဲထွက်သွားရော ကျုပ် ဂွန့် မျက်နှာကို စိတ်ရှိလက်ရှိ ထိုးပစ်လိုက်တယ်။ဂွန် ပါးစပ်ထဲက သွေးတွေ အများကြီးကျလာတယ်။ အတော်ထိသွားပုံရတယ်။ကျောင်းသားတွေ ပြန်ပြေးလာပြီး ဆွဲကြတယ်။
အခုမှ တကယ့်ကို သွားပြီ ကျုပ် တကယ့်အဆင့်အတန်းကို သူတို့တွေ သိသွားပြီ။
ကျုပ်စိတ်ကို ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင်ခဲ့။
ပြဿနာကဒါနဲ့တင်မပြီးဘူး။ဂွန် ပါးစပ်အတွင်းထဲမှာ အတော် ဒါဏ်ရာရပြီး ၅ ချက်ချုပ်လိုက်ရတယ်။ဂွန်ရဲ့မိဘတွေသိသွားပြီး ကျုပ်မိဘတွေဆီလာတိုင်တယ်။ကျုပ်ကို တရားစွဲမယ်တဲ့။ကျုပ်ထောင်ထဲနေရမှာစိုးတဲ့ ကျုပ်မိဘတွေဟာ ဂွန့်မိဘတွေကို တောင်းပန်တာပေါ့။ဘဝမှာ ထောင်ကျဖူးတယ် ဆိုတဲ့မှတ်တမ်းပါသွားရင် မလွယ်ဘူးလေ။ ကျုပ်ကျောင်းပြီးရင် အလုပ်ရဖို့ခက်သွားမယ်။ကျုပ် အမေက ” တရားမစွဲပါနဲ့ရှင်ကျွန်မတို့ သားလေးကျောင်း ခဏထုတ်ပြီး အနားယူခိုင်းပါ့မယ် ရှင်တို့ သမီးကို ထပ်ပြီး အဆက်အသွယ်မလုပ်စေရပါဘူး”လို့ အထပ်ထပ် တောင်းပန်တယ်။ ငွေလည်းပေးတယ်။သူတို့ဖက်က ငွေကို လက်မခံပေမယ့် အမေတောင်းပန်လို့ ဂွန်ရဲ့မိဘတွေက ကျေနပ် သဘောတူလိုက်တယ်။ကျုပ်ကတော့ လုံးဝမတောင်းပန်နိုင်လို့ ထွက်တောင်မတွေ့ဘူး။
မကျေနပ်တာက ကျုပ်။နစ်နာသွားတာက ကျုပ်လေ။
ဂွန်လို ချောမောလှပတဲ့မိန်းကလေးကို ရဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကျုပ် ဂွန်ကိုပြန်လိုချင်တယ်။ ဂွန်နဲ့ ရည်းစားပြန်ဖြစ်ချင်တယ်။ သူမလို ချောတဲ့မိန်းမလှနဲ့ ရည်းစားဖြစ်ဖို့ လွယ်တာမဟုတ်။ကျုပ်ကို အရင်ကလို လူတွေလေးစားတာ ပြန်ခံယူချင်တယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?ရိုက်နှက်တာ မှားမှန်းသိပေမယ့် မတောင်းပန်ချင်ဘူး။ ပြဿနာ မီးမွှေးတာ ဂွန်မဟုတ်လား။ လူကြား သူကြားထဲ သောက်ရှက်ခွဲတာလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂွန်က ကျုပ်ကို တောင်းပန်စေချင်တယ် ဒါဆို ကျုပ် လက်ခံမယ်လေ။ ကျုပ် ပြန်ချော့မှာပေါ့။ပြီးတော့ တစ်ကျောင်းလုံးကို ဂွန်က သူမ အမှားပါလို့ပြောပြီး ကျုပ်သိက္ခာကို ဆယ်စေချင်တယ်။ဒီလိုဖြစ်ရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ။ဂွန်က မတောင်းပန်။ ကျုပ်ကို အရေးမလုပ်တော့ဘူး.။ဂွန်ကိုလည်း မဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ ဒုက္ခပါ ကျုပ်ခံစားနေရပြီ။
လက်တွေ့မှာတော့ ကျုပ်မိဘတွေက ကျုပ်ကို ကျောင်းထုတ်လိုက်တယ်။ဒီတော့ ကျောင်းသားအဖွဲ့အစည်းခေါင်းဆောင်အဖြစ်က အလိုလိုပြုတ်သွားတယ်။သူများတွေကျောင်းတက်ချိန်ရောက်တိုင်း ကျုပ် ဒေါသဖြစ်ရတယ်။ကျောင်းသာတွေ ကျုပ်မရှိတဲ့နောက်ပိုင်း ကျုပ်အတင်းတွေ ပြောနေကြမှာပေါ့။ ဒီလိုတွေးမိတိုင်း ရင်ထဲကအောင့်ပြီး ပိုပြီး ဝမ်းနည်း ဒေါသဖြစ်တယ်။ဒါတွေဟာ ဂွန်နဲ့ ဂွန့်မိဘတွေကြောင့်။
ဂွန်ကတော့ အေးဆေးပဲ ရည်းစားလဲထပ်မထားဘူး စာကြိုးစားတယ်လို့ ကြားတယ်။ဂွန့်ကို ကြိုက်နေတဲ့ကောင်တွေကလည်း ရည်းစားနဲ့ကွဲတယ်ကြားတော့ ပြန်ချဉ်းကပ်နေတယ် ပြောကြတယ်။ဒီသတင်းတွေက ကျုပ်ကို ပိုနာကျည်းစေတယ်။ဂွန်က အဆင့်အတန်းမြင့်မြင့် လူကောင်းမကြီးပေါ့ လူတွေရဲ့အချစ်တော်။ကျုပ်က သောက်အဆင့်မရှိတဲ့ကောင်ပေါ့။ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပြီအိမ်မှာနေရတဲ့ ဒုက္ခကလည်း မသေးလ။
‘ ငါဒီလောက် နာမည်ကြီးတာငါ့ကို ကျောင်းမှာမတွေ့ကြရင် လူတွေက ဒီကောင်မကို မေးမှာပဲ။ ဒီကောင်မ ငါ့အကြောင်းမကောင်းပြောမှာပေါ့။’လို့
တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ကျုပ်ရင်တွေ ပူလောင်လာတယ်။ကျောင်းတက်ခွင့်ရရင် လူတွေငါ့အတင်းသိပ်ပြောမှာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့မရှိတော့ ပိုဆိုးနေမှာ။ဂွန့်မိဘတွေကို သတ်ပစ်မယ်။
၂၀၁၄ ခုနှစ် ၅ လပိုင်း ၁၉ ရက်နေ့
ကျုပ် ဂွန် တို့အိမ်ကို ရေပိုက်ပြင်တဲ့ အလုပ်သမားဟန်ဆောင်ပြီး ဝင်လိုက်တယ်။ ဂွန်မိဘတွေ တံခါးဖွင့်ပေးတယ်။ကျုပ်ရဲ့ရုပ်ကို သူတို့ မမှတ်မိတာ သေချာပြီ။ပြီးတော့ အိမ်အနေအထားကို အကဲခတ်လိုက်တယ် ။အိမ်မှာ ဂွန်ရဲ့ အမေနဲ့အဖေ ၂ ယောက်ပဲ ရှိနေတယ်။ကျုပ် ဒီလိုပြောလိုက်တယ်။”အန်တီ ကျွန်တော် ပစ္စည်းကျန်ခဲ့လို့ ခဏကြာရင် ပြန်လာခဲ့ပါမယ်။” အနီးဆုံး စူပါမားကက်ကိုသွားပြီး ကျုပ် အရက်နဲ့ ဓားတွေ ဝယ်လိုက်တယ်။ ဂွန်တို့အိမ်ကို ပြန်သွားလိုက်တယ်။ “ဪ စောစောက အလုပ်သမားပါလား”ဆိုပြီး ကျုပ်ကို တံခါးဖွင့်ပေးကြပြန်တယ်လေ။ကျုပ်ဟာ အိမ်သာထဲဝင် ရေပိုက်ပြင်ချင်ရောင်ဆောင်ပြီး ဂွန်အမေကို” အန်တီရေ ကျွန်တော့်ကို ခဏလာကူပါဦး”
ဂွန်ရဲ့အမေရောက်လာတော့ ရုတ်တရက် တံခါးပိတ်ပြီး ဓားနဲ့ မျက်နှာကိုထိုးလိုက်ပြီး တူနဲ့ထုပြီး သတ်ပစ်လိုက်တယ် ရုတ်ရုတ်သဲသဲ အခြေအနေကို ရိပ်မိတဲ့ ဂွန့်အဖေက ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဘယ်ရမလဲ သူမ အဖေကို အမိအရဖမ်းပြီး ဓါးနဲ့ထိုး သတ်ပစ်လိုက်တယ်။ သွေးထွက်နေတဲ့ အလောင်းတွေကို အသင့်ယူလာတဲ့ ဂျုံမှုန့်နဲ့ ဖြူးထားလိုက်တယ်။သွေးတွေ ဂျုံမှုန့်နဲ့ကပ်ပြီး လုံးသွားအောင်ပေါ့။ပြီးတော့ ဂွန့်အဖေရဲ့အလောင်းကို အိပ်ခန်းထဲထည့်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။သူတို့အိမ်ကခွေးကိုတော့ အဝတ်လျှော်စက်ထဲ ထည့်လှည့်ပြီးသတ်ပစ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့ အရက်သောက်ပြီး ဂွန် အိမ်ပြန်အလာကို စောင့်နေလိုက်တယ်။ဒီကောင်မ တော်တော်နဲ့အိမ်ပြန်မလာဘူး။ဂွန် အဖေ ဖုန်းကိုသုံးပြီး ” အိမ်အမြန်ပြန်လာ” လို့စာပို့လိုက်တယ်။ဂွန် အိမ်ပြန်လာတော့ ည ၁၂ နာရီကျော်နေပြီ..။
ကျွန်တော် အိမ်ထဲဝင်လာတဲ့ ဂွန်ကို ပါးစပ်ပိတ်ပြီး ရေချိုးခန်းဖက်ကို ခေါ်သွားလိုက်တယ်။”ငါ… မင်းအမေကို သတ်လိုက်ပြီ…” ပြီးတော့ ဂွန်ကို သူမအိပ်ခန်းထဲခေါ်သွားလိုက်တယ်။ “အဖေ အဖေရော?”
” နင် ငါ့အဖေကို မသတ်ပါနဲ့ ၁၁၉ ကို ဖုန်းခေါ်ခွင့်ပေးပါ နင် ငါ့ဆီကဘာလိုချင်လဲ အကုန်ပေးပါမယ်”
“ငါ နဲ့ အတူအိပ်!”
” ဟင်? ”
“ဘာလဲမလိုက်လျှောနိုင်ဘူးလားနင်နဲ့ ၂ လကျော် ကြိုက်ခဲ့တာ ဘာမှလဲမဖြစ်ခဲ့ရလို့ မကျေနပ်ဘူး”
“အဲဒါဆိုလဲ လိုက်လျှောပါ့မယ် အဖေ့ကိုတော့ မသတ်ပါနဲငါတောင်းပန်ပါတယ်ဟာ”
” အင်း နင်အဲလို လိမ္မာရင် စဉ်းစားမယ်လေ”
ကျုပ် ဂွန်ကို မုဒိမ်းကျင့်လိုက်တယ်။ မုဒိမ်းကျင့်ပြီးသွားတော့ ဂွန်ကိုခေါ်ပြီး သူမ အဖေသေနေပြီဆိုတာပြလိုက်တယ်။ဟား ဒီကောင်မ ရူးတော့တာပဲ။ဒီကောင်မ သေမလို စိတ်ထိခိုက်တာတွေတော့ ကျုပ် ဝမ်းသာတယ်။”နင်ငါ့ကို စကားအပြောမဆင်ခြင်တာလေ။မှတ်ပြီလား?”
ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ ဂွန်ကို ကျုပ် ခြေလက်တွေ ချည်နှောင်ပြီး ဖမ်းချုပ်ထားလိုက်တယ်။ပြီးတော့ ကျုပ် ကျောင်းသား လူမှုရေးအသင်းခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ဒီကောင်မသိအောင် ပြောပြတယ်။ဒီကောင်မကို အဖွဲ့ကထွက်ဖို့ ကတိတောင်းတယ်။တစ်ညလုံး ဒီကောင်မ ကို ကျုပ်စကားထိုင်ပြောတယ်။ အဖွဲ့သားတစ်ယောက်ချင်းက ကျုပ်ကို ဘယ်လိုလေးစားတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့။
ဒါနဲ့ မနက် ၉ နာရီကျော်လာတယ်။ ဒီကောင်မ ခြေလက်တွေဖြည်ပေးလိုက်ပြီး ဒီကောင်မကို နှိပ်စက်ဖို့ ကျွန်တော် စ လုပ်တယ်။ဒီကောင်မကို တစ်ချက်ချင်းရိုက်တယ်။ပြီးရင် သတ်ပစ်မလို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်မက ကျုပ် အလစ်မှာ အိမ်ပေါ်ကခုန်ချလိုက်တယ်လေ။ကျုပ်လည်း အင်္ကျီိ- ဘောင်းဘီ လဲပြီး ထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်။သွေးတွေပေမယ်ဆိုတာသိလို့ အင်္ကျီတွေ အသင့်ယူလာတာလေ။ဒါပေမဲ့ ဒီကောင်မ မိဘတွေကို ဓါးနဲ့ထိုးတော့ ကျုပ်လက်တွေပါ ဓါးရှကုန်တယ်။ဒီမှာကြည့်။ နာလိုက်တာ။ဒီကောင်မ မိဘမဲ့သွားပြီ,။တစ်ဘဝလုံး နောင်တရပေတော့
ဂျန်သည် ထောက်လှမ်းရေး ရဲအရာရှိနှင့် မှုခင်းဆိုင်ရာ စိတ်ပညာရှင်တို့အားပြောခဲ့သော ဖြောင့်ချက်များဖြစ်ပါသည်။တစ်ခါတစ်ရံ လူတို့သည် ဂျန်ကဲ့သို့ ပရဟိတလုပ်ငန်းများကို မိမိနာမည်ကြီးလိုမှု၊ လူတကာ အထင်ကြီးလေးစားမှုကို ခံလိုမှု စသည်.. မိမိအကျိုးအတွက် ပြုလုပ်ကြလေသည်။ ၎င်းတို့သည် မျက်နှာဖုံးစွပ် ပရဟိတများဖြစ်လေသည်။မျက်နှာဖုံးကျွတ်သွားသောအခါ ယခုလို ရှက်ရမ်းရမ်း၍ အန္တရယ်ကြီးစွာပေးတတ်လေသည်။
လူမိုက်တို့သည် မိမိကိုယ်ကို မိမိအပြစ်မမြင်တတ်ပေ။ တနည်းအားဖြင့် မိမိအပြစ်ကို မိမိ ဝန်မခံတတ်သောသူများသည် လူမိုက်များဖြစ်ကြသည်။အရာအားလုံးကို သူတပါးကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အပြစ်ပုံချတတ်လေသည်။ကျွန်မတို့ငယ်စဉ်က ကျောက်တုံးတစ်ခု မတော်တဆ ခလုတ်တိုက်၍ လမ်းပေါ်ချော်လဲကျလျှင် မိဘ အဘိုးအဘွားက မည်သို့ပြောသနည်း?
“သမီး နာသွားလား ဒီကျောက်တုံးကြောင့်ကိုး ။ ”
“ကဲဟယ်. ကဲဟယ်” ဆို၍ ကလေးကိုချော့သည်အနေဖြင့် ကျောက်တုံးကို ရိုက်ချင်ယောင်ဆောင်ပါသည်။စိတ်ပညာရှင်တို့က ဤနည်းသည် အလွန်မှားသော ကလေးချော့နည်းဖြစ်သည်တဲ့။ထို ကလေးသည် မိမိအပြစ်ကို မမြင်ပဲ သက်ရှိ၊ သက်မဲ့တို့ကြောင့်ဟု အပြစ်လွှဲချတတ်သည့် အကျင့်သည် အရိုးစွဲသွားတတ်လေသည်။ထိုအကျင့်ဆိုးရအောင် မိဘများက သင်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်နေသည်။
ကလေးအချင်းချင်းရန်ဖြစ်လျှင် မိမိ သားသမီးဖက်မှ ၁၀၀ % ရန်ဖြစ်ပေးသော မိဘများရှိသည်။ အလွန်မှားပါသည်။ ထိုအခါ သားသမီးတို့သည် မိမိတွင် အပြစ်မရှိ သူတပါးအပြစ်ကိုသာမြင်လေသည်။ ၎င်းကို မိဘကိုယ်တိုင်က အားပေးအားမြှောက် ရန်ဖြစ်ပေးသောအခါ မိမိမှာ အပြစ်မရှိဟု ပို၍ ယုံကြည်သွားကြသည်။
ကလေးအချင်းချင်းရန်ဖြစ်လျှင် တစ်ဖက်ကို အားနာ၍ ၁၀၀ % တောင်းပန်ကာ မိမိသားသမီးအား အပြစ်ဒါဏ်ပေးသော မိဘများသည်လည်း အလွန်မှားလေသည်။ ထိုအခါ သားသမီးတို့သည် မိမိတို့ နောက်ဆုံးအားကိုးအားထားရာ မိဘတို့ အကူအညီကိုမရ၍ မိဘများအား အယုံအကြည့်မဲ့သွားသည်ဟု စိတ်ပညာရှင်များကပြောကြသည်။
ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာလျှင် ရိုးသားစွာ အမှန်တရားဖက်မှရပ်တည်ပေးသောမိဘတို့၏ ကလေးတို့သည်သာ အမှန်တရားကို ချစ်မြတ်နိုးလေသည်။ မိမိအပြစ်ရှိလျှင် ဝန်ခံတတ်လေသည်။မှုခင်းစိတ်ပညာရှင်တို့က လူသတ်သမား ဂျန် သည် မိမိအပြစ်ကို မိမိဝန်ခံရမည်ကို အလွန်ကြောက်တတ်သည်မှာ ငယ်စဉ်ဘဝကစခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။
ယခုအခါတွင် ဂျန်၏ မိဘ များက သူ့အား မဆုံးမနိ်ုင်တော့။ ထိုအခါ လူသတ်မှုများကို ကျူးလွန်သည်အထိဖြစ်ခဲ့သည်ဟု…မှတ်ချက်ချလေသည်။ဂျန်သည် သူလုပ်ခဲ့မိသော အပြစ်ကို သူမသိချင်ပါ ။ မသိချင်သော်လည်း သိနေသည့်အခါ ဒေါသဖြစ်သည်။အရှက်ကွဲသည့်အခါ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်သွားသည်။ဖြစ်သမျှအားလုံးအား ဂွန်ကြောင့်ဟုဆိုကာ သူမအား နောင်တရ ဝမ်းနည်းစေလို၍ လူသတ်သည်အထိ ပြုလုပ်ခဲ့လေသည်။
လူသတ်ပြီးသော ဂျန်သည် အပူအပင်မရှိ အိမ်ပြန်၍ ထမင်းစားကာ မောမောနှင့် အိပ်ပျော်သွားသည်။ရဲများလာသောအခါ အိပ်ပျော်နေ၍ အတင်းနှိုးရသည်ဟုဆိုသည်။ဂွန် တိုက်ပေါ်မှ ခုန်မချခင် ဂျန်က ဂွန်အားနောက်ဆုံးပြောခဲ့သည့်စကားမှာ” ငါ ကျောင်းသွားပြီး ကျောင်းသားလူမှုရေးအဖွဲ့က နင့်ဖက်ပါတဲ့သူတွေ အကုန်လိုက်သတ်ဦးမှာ အခု နင့်ကိုအရင်သတ်မယ်” အဖမ်းခံရသောအခါလည်း သူ့လက်မှ ဓားထိသောဒါဏ်ရာအား ပတ်တီးစီးရန် တာဝန်ရှိသူများအား ဆေးခန်းပြခိုင်းခဲ့သည်။
တရားသူကြီး က လူမဆန်သော ဂျန်အား ” သေဒါဏ်” ပေးခဲ့လေသည်။
တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံတွင် ယခုလောလောဆယ် သေဒါဏ်အား လူမှုအခွင့်အရေး ဥပဒေ အရ ခဏတာ ရပ်ဆိုင်းထားသော်လည်း အစိုးရပြောင်း၍ သေဒါဏ်ခွင့်ပြုလျှင် တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ကြိုးစင်တက်ရမည်ဖြစ်သည်။ဂျန်သည် တောင်ကိုရီးယား၏ ၆၁ ယောက်မြောက် ကြိုးစင်တက်ရမည့်သူဖြစ်လေသည်။ဂွန်က မိဘမဲ့ဖြစ်သွားသည်။ဂျန်ကတော့ သေဒါဏ်အပေးခံလိုက်ရသည်။
တက္ကသိုလ် တစ်ခုလုံးတင်သာမက တောင်ကိုရီးယား တစ်နိုင်ငံလုံးက ဂျန့်ကိုမုန်းတော့သည်။ကောင်းသောရလဒ်တစ်ခုမှ မရှိပေ..။ယခုအခါ ထောင်ထဲတွင် ဒေါသမီးတို့ဖြင့်ပူလောင်၍ သေရမည့်ရက်ကို စောင့်နေလေသည်။မည်သူမပြု မိမိမှုဖြစ်ပါသည်။
May 30th, 2018.
Credit-Ma Shwe Moe ဖေ့ဘုတ်အကောင့်မှ ကူးယူဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။